सांसद सरिता गिरी वि’रूद्ध का’रबाही गर्न टेकुमा उजुरी,अब के होला?,,हेर्नुहोस! – मेचीमहाकाली डट नेट NEWS
सांसद सरिता गिरी वि’रूद्ध का’रबाही गर्न टेकुमा उजुरी,अब के होला?,,हेर्नुहोस!
समाजवादी पार्टी नेपालकी सांसद सरिता गिरीलाई प’क्राउ गरी का’रबाही गर्न माग राख्दै महानगरीय प्रहरी परिसर टेकुमा उजुरी परेको छ।गिरीलाई राज्य वि’रुद्धको कसुरमा कारबाहीका लागि महानगरीय प्रहरी परिसर टेकुमा उजुरी दर्ता गरेको छ । अधिवक्ता त्रय स’न्तोष भण्डारी, सुजन नेपाल र नवराज पाण्डेले सांसद गिरीलाई राज्य वि’रुद्धको कसुरमा कारबाहीका लागि जाहरी दिएको हुन् ।
शुक्रबार तीन जना अधिवक्ताले सांसद गिरीविरूद्ध नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अ’खण्डता र राष्ट्रिय एकताका विरुद्ध अभिव्यक्ति दिएको भन्दै टेकुमा उ’जुरी दिएका हुन्। ‍परिसरमा राज्यविरूद्धको अपराधमा उ’जुरी परेको छ। राष्ट्रविरूद्ध अभिव्यक्ति दिएको भन्दै केही अभिवक्ताहरूले उजुरी हाल्नु भएको हो,’ परिसरका प्रवक्ता तथा डिएसपी राजकुमार के’सीले जानकारी दिए।
प्रहरीले अदालतको प’क्राउ पुर्जीका लागि अनुमति दिएर प्रहरीले प’क्राउ गर्नेछ । सांसद गिरीले संसद् बैठकमै नेपालले भारतलाई नसोधी नक्शा जारी गरेकाले त्यसको औचित्य नभएको बताएपछि चौतर्फी आलोचना भएको थियो ।उजुरी परेसँगै अनुसन्धान थालिसकिएको पनि उनले बताए। ‍
पछिल्लो समय कालापानी क्षेत्र समेटिएको नेपालको नयाँ नक्सा संविधानको निशान छापमा राख्न दर्ता भएको संविधान संशोधन विधेयकमा सांसद गिरीले संशोधन प्रस्ताव हालेकी थिइन्। उक्त क्षेत्र नेपालले दा’बी गर्न स्रोत र प्रमाण नपुग्ने गिरीको जिकिर थियो। तर प्रतिनिधि सभाले उनको सं’शोधन प्रस्ताव अ’स्वीकृत गरिदिएको थियो। अस्वीकृत भएसँगै उनले संसदबाट बाहिरिएर प’त्रकारहरूसँग आफ्ना अभिव्यक्ति दिएकी थिइन्।
राष्ट्रियताको नाममा एक जना महिला सांसदको नाममा भएको व्यवहार जाँ’च गर्नु भएन भने, न’बिर्सनुस् बंगलादेशको नि’र्माण कसरी भयो,’ गिरीले भनेकी थिइन्, ‘किनभने त्यहाँ पा’किस्तानी सेनाले महिलालाई बला`त्कार गर्‍यो। महिलाहरूले देश नि’र्माण गर्नुभयो।’सांसद गि’रीबाट राष्ट्रिय एकतामा खलल पार्ने काम भएको भन्दै कारबाहीका लागि उजुरी गरेको छ । गिरीमाथि कसुर ठहर भए मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ ४९ को ५ (क) उपदफा (१) वा (२) बमो’जिमको जन्मकैदका स’जाय भोग्नुपर्ने छ।
Previous “साउनदेखि आन्तरिक पर्यटन सं’चालन गरौं”:वरिष्ठ पत्रकार विनोद त्रीपाठी,,पढ्नुहोस!
Next घर बाहिर न’निस्किएका १९ महिने शिशुमा पनि देखियो को’रोना…हेर्नुहोस्।